तपाईंको मायालु एक साथ सप्ताहांत कसरी खर्च गर्ने?
आधुनिक जीवनको तीव्र लयमा, सप्ताहांत प्रायः पारिवारिक संग कुराकानी गर्ने एकमात्र अवसर हो। यसैले, म वास्तवमा आफ्नो प्रिय प्रेमी वा परिवार संग एक साथ अन्त को बिताउन कसरी खर्च गर्न चाहन्छु, यो दिलचस्प भावनाहरु को चार्ज सम्पूर्ण अर्को हप्ताको लागि पर्याप्त छ।
तपाईंको मनपर्ने एक सप्ताहांत खर्च कसरी रूचि छ?
तपाईंले सोच्नु अघि तपाईको पति संग एकसाथ सप्ताहांत कसरी खर्च गर्ने बारे सोच्नु भयो, तपाईलाई सोच्न चाहानुहुन्छ कि तपाई तिनीहरूलाई कहाँ खर्च गर्न चाहानुहुन्छ। यदि तपाईं सप्ताहांतमा घरमा बस्न चाहनुहुन्छ भने, निम्न विकल्पहरूमा ध्यान दिनुहोस्।
कहिलेकाँही तपाईंलाई आराम र कामबाट, र कुनै पनि संग संचारको आवश्यकता छ, त्यसैले केही जोडीहरू अपार्टमेन्टको विभिन्न कोनेहरूमा सप्ताहांत खर्च गर्छन्। कसैले कम्प्यूटरमा खेल्दैछ, कसैले कुनै किताब पढिरहेको छ, एक सुगन्धित स्नानमा बास्किन्छ। तपाईं मनपर्छ र आफ्नो प्रिय संग, तर एकै समयमा सबैले आफ्नै व्यवसायमा संलग्न छन्।
तकियाहरूसँग लडाइँ सप्ताहांतमा सानो बचपन र लापरवाही दिनुहोस्! र तपाईले यो विचार मनपर्दैन? कहिलेकाहीं तपाईंले सबैलाई मूर्ख बनाउनु भएको छ, अन्यथा तपाईं बोरिंग बोरिरहन सक्नुहुन्छ। तपाईं त्यो जस्तो होइन, के हो? त्यसपछि तपाईंको हातमा तकिया लिनुहोस् र युद्ध सुरु गर्नुहोस्। गुच्ची र पक्का गर्न (केवल दर्दनाक छैन) यो सम्भव छ।
चलचित्र हेर्नुहोस्, निश्चितको लागि, काम पछि पछाडि तपाईंसँग चलचित्रको उपन्यासहरू हेर्नको लागि समय छैन। आफैलाई र तपाईंको पतिलाई खुसी पार्न केहि छान्नुहोस्। और यदि उपन्यासहरु प्रेरित नहीं हुन्छन्, तब तपाईं राम्रो पुराना सिनेमा को लागी हेर्न सक्छन्।
शतरंज, चेकर, पेलो उठाओ। "सान्त्वना खेल" को सप्ताहांतलाई भक्ति दिनुहोस्, किन?
के तपाईं मजा गर्न चाहनुहुन्छ? दुई को लागि नृत्य को व्यवस्था गर्नुहोस्। भावुक टान्गो वा संक्रामक डिस्कोको लयमा जाने प्रयास गर्नुहोस्।
अक्सर सप्ताहांतमा, तपाईं सोन चाहानुहुन्छ। त्यसो त कसलाई रोक्दै हुनुहुन्छ? आफ्नो प्रेमीसँग बिहेमा खाना खाएर अघि रोल गर्नुहोस्, र त्यसपछि धेरै कुराले निर्णय गर्छ कि एक नाक तयार गर्न जान्छ।
तपाईंको प्रेमीसँग रोमांटिक सप्ताहांत कहाँ खर्च गर्न थाहा छैन? सायद उत्तम विकल्प शहरबाट बाहिर जान्छ, जहाँ तपाइँ आफैंलाई पुरा तरिकाले रोमान्टिक वातावरणमा बिर्सनु सक्नुहुन्छ। घरका पर्खालहरू पनि एक कठिन काम गर्ने हप्ताको सम्झना गरेनन्। तर यदि त्यस्तो अवसर छैन भने, हेर्नुहोस् कि तपाईं कसरी आफ्नो प्रेमिका संग घरको रोमान्टिक सप्ताहांत खर्च गर्न सक्नुहुन्छ।
सबैभन्दा उज्यालो तरिकाले तपाइँको मनपर्ने रोमांटिक डिनर पकाउने छ, जसमा बसोबास हुनु पर्छ कामुक निरन्तरता।
अर्को विकल्प दोपहर का भोजन या रात को खाने को एक संयुक्त तैयारी हो। थुप्रै कामुक कल्पनाहरू भान्सासँग जोडिएको छ - यो उनीहरूको अनुकरण गर्न उच्च समय हो। ठीक छ, वास्तवमा आक्रमणको प्रेरणा गर्न, एक सुन्दर रेशम ड्रेसिङ गाउन वा तपाईंको पति मनपर्ने कुनै अन्य संगठनमा राख्नुहोस्।
स्ट्रिप्पिंग वा इच्छाहरूको लागि कार्डहरू प्ले गर्नुहोस्। तर सम्झना, कार्ड कर्जा - सम्मान को एक ऋण, हारे को विजेता को सबै इच्छाहरु लाई पूरा गर्न हुनेछ।
कुनै कार्ड छैन? त्यसपछि फर्फाइटमा प्ले गर्नुहोस्। यहाँ असाइनमेन्टहरू कागजको कुनै टुक्रामा लेख्न सकिन्छ र यसलाई टोपी वा जारमा राख्न यो हस्तक्षेप गर्न अधिक सुविधाजनक बनाउन सकिन्छ। वैसे, यो "इच्छाहरूको पोत" को प्रयोग न केवल सप्ताहांतमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
तपाईंको परिवारको साथ सप्ताहांत कसरी खर्च गर्ने?
यो सबै मा निर्भर गर्दछ कि कति बच्चाहरु संग तिम्रो बच्चाहरु छन्। हामी सबै भन्दा सानो खातामा लाग्दैनौं - एक खिलौना र एक विकासशील कार्टुन, यो सबै रमाइलो छ। तर पुरानो संस्करणहरू भएकाहरू सम्भव छ। उदाहरणका लागि, तपाईं पुराना रिजर्भेसनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, विशेष गरी यदि तपाईंसँग लामो समयसम्म छैन भने।
पार्क मार्फत हिड्ने एक राम्रो विकल्प हो, यसबाहेक, यो वर्षको कुनै पनि मौसमको लागि उपयुक्त छ। जाडोमा तपाईं स्नोबल्स खेल्न सक्नुहुन्छ, शरद ऋतुमा तपाइँ एन्चहरू सङ्कलन गर्दछ र रङ्गिएका फूलहरू पातहरू, वसन्त र गर्मीमा बस गर्मीमा रमाउन र गिलिर र चराहरू हेर्नुहोस्।
पुरा परिवार द्वारा चिडियाघरमा, प्रदर्शनीमा, पानीको पार्कमा पनि एक राम्रो विचार हो। मुख्य कुरा हो कि तपाईं सबै सँगै थिए, र यो व्यवसाय सबैको लागि सुन्दर थियो।
तपाइँ चलचित्र उत्पादन व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै कार्टूनहरू र फिल्महरू छन् जुन बच्चा र वयस्क दुवै (जस्तै, गारफील्ड)। खैर, यदि तपाईं र तपाईंको पति थिएटरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र बच्चाहरुका लागि एकैचोटिलाई मनपर्छ भने, तपाइँ बच्चाहरु को खेल को लागि सप्ताहांत मा थिएटर मा जान पर्छ। परी कथाहरु र वयस्कों को वातावरण को चोट नहीं पड़ेगा।
अधिक भयानक अपमानजनक वा घृणा के हो?
टुक्रा टुक्रा फर्श
स्नातकको लागि ड्रेस 2015
ट्रकको साथ माइंक कोट
पाखुराबाट घरको कुखुरा
लिम्फोस्टासिस संग हस्तमैथुन पछि व्यायाम
एस्पेन छाल मधुमेह मेलोइटस संग
केवल एक ट्रयाक्टर मा स्यान्डल्स
कहिलेकाहीँ नटेल सङ्कलन गर्ने?
कति पटक बिरालोले पहिलोपटक बिरालोलाई जन्म दिन्छ?
के भिटामिनहरू पकाएको मकैमा छन्?
कसरी घरलाई हर्बल पुरा गर्न घरमा?
डमी छिट्टै र निस्सन्देहबाट बच्चालाई कसरी क्यान्सर गर्न सकिन्छ?
भान्साको लागि फर्वार्ड फर्काउने - सबैभन्दा लोकप्रिय सामग्रीका रोचक विशेषताहरू
एक केटाको लागि बच्चाको कोठाको डिजाइन
हृदय उत्पादन पोटेशियम र म्याग्नेशियममा अमीर
वोग चश्मा - एक प्रसिद्ध ब्रान्ड देखि स्टाइलिश सूरज संरक्षण
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा कार्यक्रम
हात र खुट्टा को जोड किन कोहिन्छ?